FIFA oo dooranaysa madaxweyne - BBC News Somali
FIFA oo dooranaysa madaxweyne
Dalalka xubnaha ka ah ururka FIFA ayaa bilaabay in ay ku kulmaan Zurich, si ay u doortaan madaxweyne cusub.
Hay’adaasi ayaa waxa soo wajahay eedo la xiriiro musuq maasuq maalimihii u dambeeyay, arrimahan oo dhiiragelinaya in Sepp Blatter, uu is casilo.
Sepp Blatter, ayaa waxa uu jagaadaasi hayay 17sano, waxa uuna hadda jagadaasi u sharaxan yahay markii shanaad.
Hay’adda Sepp Blatter uu hoggaamiyaha u yahay waxaa hareeyay eedo la xiriira musuq iyo laaluush qaadasho, asxaabtiisa qaar aad ugu dhow oo ka tirsan hay’adda ayaa la xiray, xarunta Fifa waxaa weeraray boolis.
Laakiin Mr Blatter, ayaa u arka in ay wanaagsaneyd in la ogaado dhibaatadan, laakiin waxa uu doonayaa in xafiiska uu sii joogo, waxa uuna si adag u aaminsan yahay in uu yahay ninka wax ka qaban kara hay’adda Fifa.
Dadka arrimahan taxliiliyana waxa ay sheegayaan in 17sano uu hayay jagada hadii uu wax qabanayo, oo uuna weliba diiday qodobo muhiim ah oo isbadalo lagu sameyn karo.
Waloow ay jirto fadeexadan, Sepp Blatter waxa uu taageera ka helayaa qaarada Africa, iyo dalalka Asia, sababta ay u taageerayaan ayaa ah in uu wax ka qabtay ciyaaraha kubada cagta ee dalalka saboolka ah, waxa ayna haystaan codod ay dib ugu dooran karaan Mr Blatter.